Dagaal beeleed ka dhacay Berbera - Horseed Media • Somali News
December 29, 2019Somaliland
Dagaal beeleed ka dhacay Berbera
Dagaalkan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Beeyo-dhaadheer oo ku taala duleedka magaalada Berbera ee Soomaaliland,waxaana uu u dhaxeeyey laba maleeshiyo beeleed oo deegaankaas wada dega.
Inta la xaqiijiyey dagaalkaas ayaa waxaa ku geeriyooday hal ruux halka 6 kale ay ku dhaawacmeen, waxaana la sheegay in uu salka ku haayo arrimo la xiriira dhul ku yaalla deegaankaaasi.
Dadka deegaanka qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen in xiisad u dhaxeysay Labada maleeshiyo beeleed ay maalmahaan ka taagneyd deegaanka ay ku dagaalameen, isla markaana dagaalkood uu ahaa mid soo laab laabtay.
Mas’uuliyiinta Soomaaliland weli kama hadlin dagaalkaas dhex-marey Labada maleeshiyo beeleed, kaas oo weli saameyntii uu reebay laga dareemayo duleedka Magaalada Berbera.
Wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya Beeyo-dhaadheer ee duleedka Berbera ayaa waxaa ay sheegayaan in weli deegaankaas ay ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa Labada beelood, waxana dadka deegaanka ay sheegayaan inay cabsi dareemayaan.